Sisebenza kwiindawo ezingaphezu kwama-40
LIndawo yokuhlala yetax ngumqondo osisiseko wokumisela amandla erhafu yelizwe. Ngale ndlela, amazwe ayakwazi ukuhlawula irhafu kwimali efunyenwe ngabahlali bezemali kwilizwe naphi na emhlabeni, okanye kwingeniso efunyenwe elizweni ngabangengabo abahlali, kodwa soze bakwazi ukuhlawula irhafu kuleyo ingeniso ifunyenwe abangahlaliyo ngaphandle kwelizwe.
NInkampani ye-ur yenziwa ziingcali zabucala zebhanki zamanye amazwe ezihlonela umthetho wokugcina iimfihlo wasebhanki waseSwitzerland. Ungazibeka ezandleni zeengcali eziya kuqinisekisa ubufihlo bakho.
Ukumiselwa kwetax lokuhlala ilizwe
PUkufezekisa oku, ithi kusekwe iindlela ezibanzi zokufezekisa inani elikhulu labahlali ukuba bahlawulelwe irhafu. Ke, loo mntu unokuba ngumhlali kwiirhafu zamatyala aliqela ngexesha elinye.
Xa, ngokwemigaqo yangaphakathi, umntu ofanayo uthathelwa ingqalelo umhlali Ukusuka kumazwe aliqela ngaxeshanye, ungqubano lwe ukuhlala kwirhafu kabini. Kwimeko apho ikhoyo isivumelwano sokuphepha ukubhatalwa kabini Eli tyala lisonjululwa ngokusetyenziswa kwesolotya lokuhlala kwirhafu. Eli solotya limisela ukuba umntu uza kuba ngummi welizwe ukuba inqaku lokuqala liyahlangatyezwa. Iikhrayitheriya (zemithetho yokuqhekeza) zisetyenziswa ngokulandelelana, kwaye inqobo yokuqala ekuhlangatyezwana nayo kwilizwe elinye kuphela iya kumisela indawo yokuhlala irhafu kwelo lizwe. Ezi khrayitheriya zezi:
Ilizwe apho lifumaneka okanye lisetyenziswa njengendawo yokuhlala isigxina (yeyabanini, bayarhola, bayatshintshela ...)
Ilizwe apho iziko loqoqosho elinomdla (ilifa, umvuzo, ipenshini) kunye neziqu (usapho, abahlobo ...).
Ilizwe apho uhlala khona
Ukuba akukho nanye kwezi zinto zingasentla, kukho indlela apho amazwe ekuvunyelwene ngawo abonisa ukuba baya kuhlala phi
Silawula indawo yakho yokuhlala
Amazwe apho sinokulawula khona ukuhlala kwirhafu
Kukho amazwe anikezela ngeenkonzo ezingcono, oko kukuthi, izibonelelo ezifanelekileyo zokutsala abahlali kwiirhafu kwimimandla yabo. Zihlanganisiwe njengeparadesi ezifanelekileyo ukonwabela imali, ezentlalo, iinzuzo zenkundla, phakathi kwezinye. Photshugo, EUnited Kingdom, Spain, ESwitzerland, Luxembourg, EUnited States y Arab Emirates Banikezela ngenqanaba kunye nenqanaba lobomi elingafunyanwanga kweminye imimandla kwaye ke, bamiselwe njengawona mazwe alungileyo anokufaka kuwo isicelo indawo yokuhlala.
Indawo yokuhlala irhafu yaseSwitzerland
Uiza yindawo efanelekileyo yokucela i indawo yokuhlala, kuba inandipha indawo yobuchule embindini weYurophu kunye nokuzinza okubonakalayo kwezoqoqosho nakwezopolitiko. Inezona nkonzo zibalaseleyo zentlalontle, yiyo loo nto iqinisekisa umgangatho wobomi obulungileyo.
Akunyanzelekanga ukuba Umhlali waseSwitzerland ukuqhuba ishishini kweli lizwe. Kukho izakhiwo zorhwebo ezingafuni abahlali baseSwitzerland, njenge Limited InkampaniNangona kunjalo, ezinye iindlela zifuna ukuba umnini abe ngumhlali elizweni.
Nabani na osebenza okanye oneshishini eSwitzerland, okanye ohlala kwindawo engaphezulu kweentsuku ezili-180 kuwo nawuphi na unyaka, uchongwa njengomhlali ngeenjongo zerhafu. Iinkampani abahlali eSwitzerland Bahlawula irhafu kwingeniso yabo yehlabathi, ngelixa iinkampani ezingengabahlali bahlawula kuphela umvuzo wabo waseSwitzerland.
Abaphambukeli abahlala eSwitzerland okokuqala okanye emva kokungabikho iminyaka elishumi okungenani kwaye bengazibandakanyi benza imisebenzi enenzuzo enkulu (ezimeleyo okanye yokuqesha) kwilizwe laseSwitzerland, banokukhetha ukuhlawula irhafu yabo ngokuba ulawulo lwerhafu olukhethekileyo lubizwa "ukugqithisa kwirhafu", "Irhafu kuloliwe wobomi eSwitzerland" okanye "irhafu kwinkcitho eSwitzerland".
Ukongeza, abahlawula irhafu kubahlali abagqithisa eSwitzerland banokufumana izibonelelo izivumelwano zerhafu ephindwe kabini, nangona ezinye izivumelwano ekuvunyelwene ngazo yi-Switzerland kunye namanye amazwe (iJamani, i-Austria, iBelgium, i-Italiya, i-Canada, ne-I-United States), zifuna ukuba zibandakanye kwisibhengezo sabo sase-Swiss sayo yonke ingeniso okanye ingeniso evela kwilizwe langaphandle ekubhekiswa kulo ukuba babe nakho ukuxhamla kwezivumelwano.
Ukuhlala kwirhafu eLuxembourg
Iindidi zokuhlala zerhafu
Ay uhlale ukhumbula ukuba, ngokungafaniyo nokuhamba ngokukhululeka kwabasebenzi kunye nokuhamba ngokukhululeka kwabantu, ukuhlala eLuxembourg akulolungelo elingenasiphelo kwaye elingenamda. Zintathu Iindidi zokuhlala:
Indawo yokuhlala engaphantsi kweenyanga ezi-3Abemi benyunyana banelungelo lokuhlala ixesha elingaphantsi kweenyanga ezintathu
Indawo yokuhlala phakathi kweenyanga ezintathu kunye nesihlanu: Abo basebenzela abanye, ngabafundi kwaye banayo i-inshurensi yezonyango kwaye iindlela zezemali banelungelo lokuhlala
Indawo yokuhlala esisigxina: emva kweminyaka emi-5 yokuhlala ngokusemthethweni, wonke umntu unelungelo loncedo olufana noluntu
yena inkqubo yerhafu eLuxembourg yahlula phakathi abahlali kunye nabangengobemi. Abahlali bahlawuliswa irhafu kwingeniso yabo kwilizwe lonke, ngelixa abahlali bengahlawuliswa irhafu yengeniso evela kwilizwe lasekhaya.
Unyaka wemali eLuxembourg uqala nge-1 kaJanuwari kwaye uphela ngoDisemba 31. I abahlali beerhafu kwiGrand Duchy Bahlawula irhafu kwiindidi ezahlukeneyo zengeniso, njengengeniso yeshishini (inzuzo eseleyo kurhwebo, kunye nengeniso yezolimo kunye neyezamahlathi), izibonelelo zomsebenzi (kubandakanya umvuzo, izindlu, inqwelo yenkampani, njl. Njl.), Ipenshoni kunye Utyalomali (inzala kunye nezabelo) kunye nengeniso yokuqeshiswa kwepropathi kunye nengeniso evela kwintengiso yepropathi kunye nezinye izinto.
I-Luxembourg isayine ngaphezulu kwezivumelwano zerhafu ezingama-50 ukunqanda abahlali ukuba bahlawule irhafu kwingeniso efanayo kumazwe angaphezu kwelizwe.
Indawo yokuhlala yetax
I-ondres inika izibonelelo ezithandekayo kwabo bacela indawo yokuhlala kwintsimi. Ezona ndlela zirhafu ziluncedo e-UK zezi: Ii-non-doms (Abahlali abangaGunyaziswanga) kunye "Abangabahlali abaqhelekileyo" (Abahlali abangahlali ndawo). Phantse abantu abangama-65.000 baxhamla kolu nyango lwerhafu.
Los Abahlali abangahlali ndawoBanokukhetha ukuhlawula irhafu yokuhlawula irhafu kwimali yabo yangaphandle de bathunyelwe e-United Kingdom. Nangona kunjalo, kufuneka bahlawule irhafu yengeniso efunyenwe e-UK kunye nenzuzo eyinzuzo eyenziweyo phesheya, ngaphandle kokuba bane-D-non-doms, hali engahambelaniyo.
Kude kube ngu-Epreli ka-2008, umntu oqwalaselweyo uhlala e-uk, kodwa engalawulwa elizweni ("enga-doms"), banokufumana i-a unyango lwerhafu olufanelekileyo, apho irhafu yengeniso esebenzayo kwingeniso evela kumthombo welinye ilizwe yayirhafiswa kuphela xa isusiwe eUnited Kingdom. Ngalo lonke ixesha abantu abangahlali phantsi kwengcinezelo beyeka umvuzo wabo phesheya bebengahlawulwanga irhafu e-United Kingdom. Ukuba bayayihlawula imali abayamkelayo okanye iingeniso abazifumene phesheya eUnited Kingdom, kuya kufuneka bahlawule irhafu.
Umgaqo ngokubanzi wokumiselwa kwendawo yokuhlala e-United Kingdom umiselwa ngokusisigxina:
Ngaphezulu kweentsuku ezili-183 e-UK kunyaka-mali.
Umndilili weentsuku ezingama-91 ngonyaka okanye ngaphezulu, ngaphezulu kweminyaka emine.
Ukuba unayo usapho, kwezentlalo (ubulungu kwiiklabhu ...), zorhwebo, njl.
Ukuhlala kwirhafu eSpain
Kuqhelekile ukucinga ukuba ukucela imvume yokuhlala eSpain Yinkqubo ebiza imali eninzi kwaye eya kukubhenca kwiirhafu zaseSpain, ezinokuthintelwa ngabahlali endaweni yoko. Ngapha koko, ngokwahlukileyo. I ukuhlala kwirhafu eSpain Iya kukuzisela uthotho lwezibonelelo, kuquka ukufikelela simahla kumazwe angama-27 e-European Union. Ukongeza, unokuyonwabela i ukuhlala ungenamda. Ukuba uhlala ikakhulu unyaka njengomntu ongahlali, waphula umthetho, kuba ukuhlala kwabakhenkethi, nokuba ngumhlali wase-EU, kunqunyelwe iintsuku ezili-180 ngonyaka. Ukuba ugqithe kulo mda unokuhlawuliswa.
ISpain yenye yezona ndawo zibalaseleyo emhlabeni onokuhlala kuzo, ngenxa yomgangatho wobomi obugqwesileyo, imozulu enomdla, izixeko ezinembali, kunye nenkqubo yezempilo ethathwa njengeyona ndawo intle emhlabeni. Ithuba lokuseka inkampani kwinkqubo yanamhlanje kunye nokhuphiswano lwerhafu yomdibaniso. Inkqubo ye- Irhafu yombutho eSpain Iipesenti ezingama-30, nangona iinkampani ezincinci kunye eziphakathi ziphakathi kokunandipha izinga lokuncitshiswa, zincinci kwi-20% ngenzuzo ukuya kuthi ga kwi-300.000 euros kunye ne-25% yezibonelelo ezigqithileyo kuleyo kunye neenkampani eziphakathi, 25% ukuya kwi-300.000 yeurandi kunye Iipesenti ezingama-30 zokufumana izibonelelo eziphezulu.
Umntu wendalo ungumhlali kwindawo yaseSpain xa kwenzeka naziphi na kwezi meko zilandelayo:
Hlala ngaphezulu kweentsuku ezili-183, ngexesha lekhalenda, kumhlaba waseSpain.
Zinza eSpain eyona nombolo iphambili okanye isiseko semisebenzi yabo okanye iimfuno zoqoqosho ngqo okanye ngokungathanga ngqo.
Umlingane ongahambelani nomthetho kunye nabantwana abancinci abaxhomekeke kulomntu ohlala kule ndawo yokuhlala.
Ukuhlala kwirhafu e-United States
a Ikhadi elisisigxina eUnited States, yaziwa njenge Green CardIsazisi kubahlali abasisigxina eUnited States abangenabemi baseMelika. Abaphathi beKhadi eliluhlaza banayo ilungelo lokuhlala kwaye usebenze kwilizwe, nangona kunjalo, kufuneka bagcine imeko yokuhlala e-US, nangona ingarhoxiswa ukuba kubonisiwe ukuba ulwaphulo-mthetho oluthile lwenziwe. Ikhadi libandakanya igama lomntu ophetheyo, ifoto kunye nolunye ulwazi lomntu.
Nje ukuba ufumane ikhadi eliluhlaza, ngokuzenzekelayo liba Umhlali waseRhafu, ukusukela kunyaka owafumana ngawo ikhadi eliluhlaza, kwaye kufuneka uyichaze yonke ingeniso yakho. Kuya kufuneka ubhengeze umvuzo womsebenzi wakho ngaphakathi elizweni, kunye nayo yonke imali oyifumanayo kutyalo-mali okanye kwimisebenzi ephuhliswe ngaphandle kwemida ye-United States. Uya kudinga ukufaka ifom yokubuyisa yerhafu usebenzisa i-IR Form 8938 kunye neFom 1040 (ukuba ubambe iiasethi zemali phesheya ezixabisa ngaphezulu kwe- $ 50.000 XNUMX), ngonyaka. Umbono kukulwa ukukhutshwa kwirhafu kwabo bahlawula izindlu kunye nezinto abazityala imali kwiiakhawunti zaphesheya.
Nangona ungaphila kwaye usebenzisane nayo, unika amalungelo ambalwa kunabemi. Phantse isigidi esinye samakhadi amatsha aluhlaza asenziwa kunyaka ngamnye wemali.
Abaphambukeli abatyale ubuncinci besigidi esinye seedola kwaye benze imisebenzi elishumi, banelungelo lokufumana a I-visa ye-EB-5 kwaye ugqibela ngokufumana ikhadi eliluhlaza. Isixa sokutyala sinokuncitshiswa sisiqingatha sesigidi seedola, ukuba senziwe kwindawo ethile yezoqoqosho. Le ndawo yokuhlala okwethutyana, ngengqondo yokuba bangarhoxiswa ukuba iimfuno zokuthobela azigcinwanga ixesha elithile. Le Visa ayifanele ukuba idityaniswe nezo zinikezelwa kutyalo mali, kwaye ziyaziwa ngokuba yi-E-2 kuzo zonke iintlobo zamashishini okanye njenge-E-1 yamashishini angeniso kumazwe angaphandle.
Ukuhlala kwirhafu kwi-Emirates
Njani umhlali we-United Arab Emirates, ungasebenzisa ithuba izibonelelo zerhafu yeli lizwe, akukho rhafu yengeniso, akukho ntlawulo kwintlalontle, akukho rhafu yenzuzo, kwiinkampani okanye kubutyebi. Unokufumana uncedo kwinethiwekhi yomnatha ye izivumelwano zerhafu zokuthintela irhafu ephindiweyo. Zimbini iindlela zokufumana i-visa yomtyali mali kwi-United Arab Emirates:
1.Tyala imali kwi-real estate: xa utyala imali kwicandelo lezindlu, kukho ukhetho lokufaka isicelo sevisa, kuxhomekeka kwipropathi oyithengileyo. Oku kukunika ithuba lokufumana imbuyekezo entle ukuba uqeshisa ngepropathi.
Ukudalwa kwenkampani: ukuseka inkampani e-Emirates usebenzisa iphepha-mvume lokurhweba elikuvumela ukuba ube yinkampani yakho kwaye ube ne-Visa yakho. Akunyanzelekanga ukuba uqhube nayiphi na imisebenzi yeshishini, nangona ungayisebenzisela ishishini lokwenyani
a I-visa yokuhlala Ikuvumela ukuba uhlale e-United Arab Emirates njengomhlali ithuba lokuhlaziywa kweminyaka emithathu, ngaphandle kokuba ulishiya ilizwe ixesha elingaphezu kweenyanga ezi-6.
Ngokuhlala e-Emirates uza kufumana yonke intuthuzelo kunye nokhuseleko lobomi bakho kunye nosapho lwakho. Abahlali abahlawulisi rhafu kwirente, kwaye uninzi lwezinto zentengiso azinabinamatyala. Yindawo ekunyamezeleka kakhulu kuyo ukuthunyelwa kwelinye ilizwe. Izikolo kunye neeyunivesithi ziya kuba sezandleni zakho kwimfundo yabantwana bakho, kunye nembono yeshishini lakho kunye nokhetho olunomdla lokutsala imali. Ubukho kwi-Emirates buhlala kuthetha amathuba amatsha.
Iindidi zevisa visa
Igolide Visa yaseSpain
spaña isungule inkqubo yayo ivisa yegolide Ngo-2013. Ngokutyala imali engama-500.000 euros kwicandelo lezindlu nomhlaba unokufumana indawo yokuhlala. Le Visa inokuvuselelwa rhoqo kwiminyaka emibini kwaye rhoqo emva kweminyaka emihlanu. Kuyenzeka ukuba ufumane ukuhlala ngokusisigxina nokuba ngummi emva kweminyaka elishumi. Akukho mfuneko yokuba uhlala kwimimandla yaseSpain ukuze ulondoloze kwaye uphinde uvuselele imvume yokuhlala yomtyali mali. Ukongeza, ngeVisa yakho yeGolide unako uhambe ngaphandle kwe-Schengen visa ngawo onke amazwe e-European Union.
Ayisiye kuphela ilizwe laseYurophu elinikezela a imvume yemvume yegolide kunye nokuhlala kutyalomali kutyalo mali. I-Portugal, iGrisi, iCyprus neMalta zikwanikezela ngeenkqubo zokuhlala e-visa, kunye nokuba ngummi.
Inqanaba loku-1 lotyalo-mali lwe-visa e-UK
abatyali abafuna i I-visa yokuhlala e-UK banokuthathela ingqalelo inqanaba lotyalo-mali lwe-visa engu-1 ukuhlala okwethutyana eUnited Kingdom, kutyalo mali kunye nosapho olusondeleyo (iqabane kunye nabantwana abangaphantsi kweminyaka eli-18 ubudala). Emva kweminyaka emi-2, banokutyala i- £ 10.000.000 ukuze bazizinze ngokusisigxina (okanye i- £ 5.000.000 emva kweminyaka emi-3). Banokufaka isicelo sokuba ngabemi emva kweminyaka emihlanu okanye emi-5 yokuhlala. Utyalomali aluvunyelwe kwicandelo lokuthengiswa kwezindlu.
Ukufumana ilungelo lokuba ngummi waseBritane ngale visa yenye yeendlela ezinomdla kakhulu zotyalo-mali.
EPortugal Visa yeGolide
Yaziswa ngo-2012, le nkqubo ikhuthazwe ngenkuthalo ngurhulumente wePortugal. Utyalomali lwe- € 500.000 luyafuneka kwicandelo lezindlu kunye nepropathi yasePortugal ukufumana iphepha-mvume lokuhlala kusapho, kubandakanya abantwana abaxhomekekileyo. I ivisa Inokuhlaziywa rhoqo emva kweminyaka emibini. Emva kweminyaka emi-5 unokucela ukuhlala ngokusisigxina kwaye emva kweminyaka emi-6, ukuba ngummi ngaphandle kwesidingo sokuhlala kwilizwe lasePortugal.
Abatyalomali abathenga ipropathi ePortugal banethemba elihle lokufumana imali kwi-capital lets kule minyaka izayo.
Ukufaka isicelo koluhlobo lwe-visa yendawo yokuhlala, kubalulekile ukufumana ingcebiso efanelekileyo kwasekuqaleni ukuze uphephe iimpazamo ezixabisa kakhulu. Inkqubo nganye ye-visa yahlukile kwaye yahluka ngokwemeko yomthengi ngamnye, kunye neemfuno kunye neenjongo zabo.